Ukuya esikhathini isikhathi eside🥇Izimbangela eziningi ezijwayelekile
Ukuya esikhathini isikhathi eside: izimbangela ezivame kakhulu
Ukuya esikhathini isikhathi eside Ukuhamba kokuya esikhathini kuba khona kuyo yonke impilo yowesifazane, kusukela ekuthweni kuya ukuya esikhathini. Kumaka ukuqala kwe i-ovulation isifazane okwathi, ngamafuphi, kusho ukuthi umzimba usuvele ulungiselelwe a sokukhulelwa.
Lapho umjikelezo uvama futhi uthatha izinsuku ezintathu kuya kwezingu-3 ngenyanga, kuyinkomba eqinile yokuthi impilo yabesifazane isesikhathini. Manje, okumbalwa abantu abanaka kukho, ucingo ukuya esikhathini isikhathi eside .Uzwile ngalokho?
Ekuqaleni ungakholelwa ngisho ukuthi le nto ijwayelekile futhi akufanele ibe yisizathu sokukhathazeka. Kepha ungenzi iphutha: ngemuva kokungahambi kahle kokugeleza, kungenzeka okukhulu ukuthi kukhona ukugula okungathi sína nokuthi udinga ukubhekwa ngokuningilizi nodokotela okhethekile kulokhu. nodokotela wezifo zabesifazane.
Ngicabanga ngakho, futhi ukuze uhlale ubukele, ngakha okuthunyelwe nakho konke odinga ukukwazi ngakho.
Ekufundeni kwanamuhla, ngichaza izimbangela zokuya esikhathini isikhathi eside nezindlela eziphambili zokwelashwa. Qhubeka ufunde kabanzi!
Konke mayelana nokuya esikhathini isikhathi eside
Ukuya esikhathini ngokungajwayelekile
Izimbangela ezingenzeka zokuya esikhathini isikhathi eside.
Ukwelashwa kokuya esikhathini isikhathi eside.
Ngaphambi kokuthola ukuthi ukuhamba esikhathini isikhathi eside kuyini. Njengoba ngishilo, umjikelezo wokuya esikhathini uqala esikhathini sokuthomba, ovame ukwenzeka phakathi kweminyaka eyi-10-17. Noma kunjalo, kukhona abesifazane abaya esikhathini noma ngaphambi kwaleli qembu leminyaka.
La ukuya esikhathini (Igama elinikezwe ukuya esikhathini) okuwuphawu lokuthi umzimba sowesifazane usuqale ukukhipha isisu futhi ulungele ukukhulelwa. Noma kunjalo, uma umanyolo, i-endometrium (i-mucosa elawula isibeletho futhi yakhelwe ukwamukela umbungu) iyakhishwa futhi ibangele ukopha: ukugeleza okudumile kokuya esikhathini.
I-Las izinkathi ezijwayelekile zihlala izinsuku ezintathu kuya kwezingu-3 futhi kufanele lwenziwe kanye ngenyanga. Kepha kubalulekile futhi ukuthi wazi ukuthi lokhu akusiyona njalo isimo kubantu besifazane abaningi. Ingxenye enhle yomphakathi wesifazane inezikhathi zokuya esikhathini ezingekho emthethweni, okwenza kube nzima ukulawula isikhathi sokuzala futhi lokho kungahle kube wumphumela wezinkinga ezinkulu zempilo.
Ngizoxoxa ngalokhu ngemininingwane engezansi. Bheka!
Imvamisa, abesifazane basebenziswa ukufika sekwephuzile ukuya esikhathini. Leli qiniso, elibhekele ukudangala abesifazane abaningi, ukumenyezelwa kokukhulelwa okungalindelekile noma a ubunzima be-gynecological.
Ngakolunye uhlangothi, kunezimo lapho ukuhamba kokuya esikhathini kumane kuthathe isikhathi eside, okungukuthi, kuthatha isikhathi eside kunokujwayelekile.
Ukuze kuthathwe isikhathi eside, ukuya esikhathini kufanele ukunwebe izinsuku ezingaphezu kwezingu-8, noma ngabe uzwa ukugeleza okukhulu, okulingene noma okukhanya.
Elinye iphuzu okufanele ulicabangele inani lezikhathi lapho umuntu wesifazane eshintsha i-tampon ngosuku. Uma kunezinguquko ezingaphezu kwe-6, lokhu kungasho ukuthi ukugeleza kuphezulu kakhulu. Okufanayo kusebenza kumbala wegazi, okuthi, uma kumnyama kakhulu noma kukhanya kakhulu, okulungele ukubiza udokotela wezifo zamazinyo ngokushesha.
Bambalwa abantu abakwazi lokhu, kepha kunezimbangela eziningi ngemuva kwesikhathi eside. Lezi zizathu zingahluka kakhulu, kusuka enkingeni ye-hormonal kuya kokunye okubi kakhulu, njengomdlavuza. Phakathi kwezinto ezifaka isandla kakhulu kulesi simo, singagqamisa:
Ukwehlukaniswa kwepilisi yokuvimbela inzalo.
Ukunakwa: Kunezimo lapho ukuya esikhathini kungajwayelekile noma kuthatha isikhathi eside ukuthi kuphele ngenxa yezizathu ezilula. Ngenxa yalokhu, kubaluleke kakhulu ukutshala imali ekuqaphelekeni kwezokwelapha ukuthola imbangela yangempela yenkinga.
Ukubona ukuthi yini ebangela ukuya esikhathini isikhathi eside, udokotela kuzodingeka ahlole isitho sangasese ngokuhlola ukuthinta. Umphumela onembe kakhudlwana, ochwepheshe abaningi banomkhuba wokucela ezinye izivivinyo zokuhlaziywa, kanti ukuhlolwa kwe-colposcopy kanye ne-Pap kube yikhona okuyinhloko.
Ngemuva kokuthola imbangela yokuya esikhathini isikhathi eside, udokotela wezifo zesibeletho angancoma ukwelashwa okuhlukile. Konke kuzoncika ebukeni benkinga nakwezinye izindlela ezitholakalayo. Izinketho ezinconywe kakhulu namuhla yile:
Kusetshenziswa amaphilisi okulawula ukuzala ukulinganisa amazinga ama-hormone akhona emzimbeni.
Imithi elwa nokuvuvukala, esiza ukunciphisa ukopha.
Ukwehla nokwelashwa kwesibeletho, ezimweni ezinzima kakhulu. Lapha, kungenzeka futhi ukususa i-endometrium noma isibeletho, ngokuya ngesimo sesiguli.
Khumbula: Lapho ukhomba ukuya esikhathini isikhathi eside, gwema ukuzelapha ngokwelashwa noma ukusebenzisa amakhambi asekhaya athembisa ukulungisa inkinga. Indlela engcono yokuphuma ukuya kudokotela onguchwepheshe.
Ukuya esikhathini esikhathini esingakanani
Ukungahlali kahle kwe-urinary kokuya esikhathini
Ukuya esikhathini kanye ne-anemia, konke odinga ukukwazi